CIYAARAHA SOMALIDA | Ciyaaro Online
Home - CIYAARAHA SOMALIDA
Wasiirka amniga oo sheegay in Garoonka Stadium Muqdisho lagu ciyaarayo mardhow.
Wasiirka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa sheegay in Garoonka Stadium Muqdisho mardhow lagu ciyaari doono noocyada kala duwan ee ciyaaraha. Wasiirku waxaa uu sheegay in Ciidanka AMISOM ay kala wareegayaan Garoonka Caalamiga ah ee Stadium Muqdisho. Waxaa uu intaas ku daray in Garoonka Stadium Muqdisho dib u billaabayo howlihiisii ciyaaraha ee caalamiga ahaa. Ciidanka AMISOM ayaa ...
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo sheegay in Ciyaartoyda 17-jirrada Soomaaliya la Xareynayo loona Diyaarinayo Tartamo kale
Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa wuxuu xalay ka qeyb galay Casho loo sameeyay Ciyaartoyda xulka Qaranka ee da’doodu ka yartahay 17jirrada Soomaaliya, kuwaas oo kaalinta 2aad ka galay koobka Bariga iyo Bartamaha Afrika. Wuxuu sheegay in xiddigahaas ay noqon doonaan Mustaqbalka xulka Qaranka Dalkeenna, isla markaana ay tahay in la xareeyo loona diyaariyo koobka ciyaartoyda ...
Xulka 17-jirrada Soomaaliya oo Muqdisho lagu soo dhoweynayo
Ciyaartoyda Xulka Qaranka ee 17-jirrada Soomaaliya ayaa waxay goordhow kusoo wajahanyihiin Muqdisho, iyadoo Safarkooda uu qeyb ka yahay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Mahdi Maxamed Guuleed. Waxaa Caasimadda ka socota Qabanqaabada soo dhoweynta Ciyaartoydaas, waxaana ka qeyb qaadan doona soo dhoweyntooda Ra’iisul Wasaare Kheyre sida ay wararka qaar sheegayaan. Ciyaartoyda Muqdisho lagu soo dhoweynayo waxay kaalinta 2-aad ka galeen Koobka ...
Somaliya oo kaalinta 2aad ka gashay tartanka CECAFA U 17
Xulka 17 jirrada Soomaaliya ayaa waxaa ay kaalinta 2aad ka galeen tartanka Bariga iyo bartamaha Afrika ee ka dhacay Dalka Burundi. Wiilasha matalayay xulkeenna ee Ocean Stars ayaa soo bandhigay ciyaar aad u qiimo badneyd waxaana ay natiijada ciyaarta noqotay mid ku dhamaatay 2-0. Xulka Tanzania ayaa ka faa’ideystay fursado ay dayaceen wiilasha Soomaalida,waxaana ay labada gool kala dhaliyeen labada ...
Xulka 17-jirrada Soomaaliya oo Maanta Ciyaaraya kulanka kama Dambeysta Koobka CECAFA 2018-ka iyo Madax Daawaneysa Ciyaartaas
Xulka 17-jirrada Soomaaliya ayaa maanta waxay Ciyaari doonaan Finalka Koobka Bariga iyo Bartamaha Afrika ee xiddigaha la da’da eg 17-ka Sano, kaasoo ka dhacaya Sanadkan magaalada Bujumbura ee Xarunta Dalka Burundi. Kulanka Kama Dambeysta ah waxaa isugu soo haray xulalka Qaranka Soomaaliya iyo Tanzania, iyadoo ciyaarta xiisaha Badan ay dhici doonto Galabta waqtiga Casirka ah. Labada Xul ayaa waxay kasoo ...
Maamullada Warta Nabadda iyo Hodon oo isku heysta Xiddigga Farxaan Duqoow
Maamullada Degmooyinka Warta Nabadda iyo Hodon ee Magaalada Muqdisho ayaa isku heysta Xiddigga Farxaan Duqoow ee dhaliyay labada Gool ee ay Soomaaliya ku garaacday Dalalka Kenya iyo Uganda. Farxaan ayaa waxaa uu ka mid yahay 17 jirrada Soomaaliya ku matalaya Ciyaaraha kubadda Cagta ee Bariga iyo baryamaha Afrika ee ka socda Dalka Burundi. Markii xiddiggan uu soo shaac baxay waxaa ...
Somalia oo iska xaadirisay finalka CECAFA kaddib markii ay garaacday Uganda
Xulka Qaranka Soomaaliya ee 17 jirrada ah ayaa guul muhiim ah ka gaaray dalka Uganda,waxaana ay u gudbeen kama dambeysta tartanka Ciyaaraha kubadda Cagta ee Bariga iyo Bartamaha Afrika. Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa gool kulaad ka badbaadiyay kuwa Uganda,waxaana ay ka dhaliyeen gool,sidaas ayey Soomaaliya uga badisay Uganda uguna gudubtay kama dambeysta tartanka Ciyaaraha Bariga iyo bartamaha Afrika. Tababaraha Xulka ...
Xulka Qaranka Soomaaliya ee 17-jirrada oo maanta wajahaya Dhiggooda Uganda
Xulka Qaranka Soomaaliya ayaa maanta la ciyaari doona dhiggiisa, dalka Uganda iyadoo ciyaartoyda 17-jirrada Qarankeenna ay galabta ciyaar xiiso badan kula qaadan doonaan garoonka Ngozi ee magaalada Bujunbura. Kulankaas waxay xulka Qaranka Soomaaliya diyaar garow ugu jiraan in ay ku aadaan finalka koobka, haddii ay guuleystaan. Somalia Un17 xiddigahoodu waxay kasoo gudbeen Guruubka iyagoo wata 7 dhibcood, xilli ay soo ...
Isku aadka Koobka CECAFA UN17 oo la sameeyay Somalia yey ku Beegantay??
Isku aadka Tartanka CECAFA Un17 ee ka socda dalka Burundi, wareeggiisa Semi-finalka ayaa la sameeyay, iyadoo xulka Soomaaliya uu Sanadkan ka mid yahay xulalka Tartanka ka qeyb gelaya. Xulka Qaranka Soomaaliya ee ka yar 17-ka Sano ayaa sanadkan wacdaro ka dhigaya koobka CECAFA, waxaama suuragal laga dhigayaa in Somalia ay sanadkan koobka Qaadi karaan, marka la fiiriyo hannaanka ciyaareed ee ...
Mo Farax oo kaalinta 3aad ka galay Marathon-ka London
Ororyahanka Asalkiisu Soomaaliga yahay ee u orda Dalka Ingiriiska mo Saalax ayaa waxaa uu shalay kaalinta 3aad ka galay Orodka Marathonka ee ka dhacay Magaalada London. Eliud Kipchoge, oo u dhashay Dalka Kenya ayaa galay kaalinta 1aad,waxaana uu ka faa’ideystay Maxamed Faarax oo mar seexday inta Orodka lagu jiray. Mo Farax inkasta oo uu kaalinta saddexaad ku dhameystay haddana waxaa ...
Kooxda Dekadda ayaa ka badbaadday Khasaare kale oo ay kala laaban laheyd Tababaraheedii hore ee Cabdi Joon, keddib markii ay Goolka Garabdhaca oo soo daahay dhaliyeen Daqiiqadihii 80-aadka ee kulankii Horseed. Ciyaarta labada kooxood waxaa sida badan ku gacan sarreysay Horseed, taasoo dhalisay Goolasha Kulanka loo maleynayay in uu kusoo dhammaan karo. Horseed ayaa waxay ciyaarta ilaa 84 daqiiqo ku ...